Halyeey kooxda Juventus ah oo weerar culus ku qaday Cristiano Ronaldo – Gool FM
Manchester City oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Aston Villa oo ay ku booqatay garoonka Villa Park… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Cadiz iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Aston Villa iyo Man City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Xiddig muhiim ah oo ka tirsan kooxda Real Madrid oo laga helay Korona Fayras… (Miyuu seegi doonaa kulan ay ka horjeedaan Chelsea?)
Maxaa ka soo kordhay xanta David Alaba iyo ku biiristiisa Real Madrid?
Dajiye March 4, 2021
(Yurub) 04 Maarso 2021. Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Juventus ee José Altafini ayaa weerar culus ku qaaday Cristiano Ronaldo, isagoo carabka ku adkeeyay inuusan gaari doonin heerka Pele, Maradona, iyo sidoo kale Lionel Messi.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu bixiyay Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Juventus ee José Altafini, wuxuuna yiri:
“Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado cidda hindisay qaabkan. Cristiano cidna ma uusan gaarin. Pele wuxuu dhaliyay 1225 gool kulammada rasmiga ah, kani ma ahan kulamada saaxiibtinimo, ama waxyaabo noocaas ah, kamana mid ahan kulammada saaxiibtinimo, ama waxyaabo noocaas ah.”
“Cristiano Ronaldo ma gaari doono Pele, mana gaari doono marna heerkiisa.”
“Xaqiiqdii, Ronaldo ma gaadhi doono lugaha Pele, Maradona, ama Messi, sababtoo ah kuwani waa kuwa ugu fiican taariikhda kubadda cagta.”